Fayadhowrka qolka musqusha
Farqiga u dhexeeya walxaha cusub iyo kuwa dib loo warshadeeyay ee caagga ah
Markaad tahay alaab caag ah oo jumlo ah, ganacsatada qaar ayaa laga yaabaa inay ku siiyaan qiimo aad u soo jiidasho leh halka celceliska qiimaha suuqa uu aad uga sarreeyo. Taasi waa sababta oo ah waxay ka faa'iideysanayaan alaabta dib loo warshadeeyay. Halkan, waxaan jeclaan lahayn inaan si kooban u soo bandhigno farqiga u dhexeeya walxo cusub oo caag ah...
Shaqada badhkeed, madadaalo badhkeed
Qoondaynta saxda ah waxay ka caawin kartaa shaqaalaha inay geeyaan saamiga shaqada iyo wakhtiga firaaqada si macquul ah. Leto ma aha oo kaliya inay ka go'an tahay inay tababarto xubnaha kooxda xirfadahooda ganacsi, laakiin sidoo kale inta badan waxay abaabushaa dhaqdhaqaaqyada dibadda. Jiilaalka qabow ka dib, gu'gii ayaa soo noqday. Si loo bixiyo...
Marka hore Macmiil, Abuur Qiimaha Ganacsiga
Sannadkii 2007, dad yar, oo ay ka buuxsameen xamaasad iyo abuur, ayaa qol kala badh ku leh Yiwu International Trade City, iyaga oo booska la wadaaga dukaan kale. Kadibna waxay bilaabeen ganacsi, waxay ururiyeen karti iyo wada shaqayn. Waxay ganacsiga ka bilaabeen qalab...
Markaad dooranayso saxanka, faahfaahintee ayaa ah in fiiro gaar ah loo yeesho?
Markaad iibsanayso saxanka, maxaad danaynaysaa? Qalabka, qaabka, cabbirka. Caadi ahaan qof kastaa asal ahaan wuxuu daneeyaa kaliya qodobadan. Laakiin waxaa weli jira qodobbo kale oo muhiim ah oo qof walba uu iska indhatiray, dhibaatooyin badanna keenay...
Tianfu Zhichuang Park, Chengbei Road, Yiwu, 322008, Zhejiang, Shiinaha